Daafaca Barcelona Ee Jordi Alba Oo Ku Baaqay In La Hubiyo Caafimaadka Iniesta + Sababta %
Daafaca dambeedka bidix ee Barcelona, wiilka lagu magacaabo Jordi Alba ayaa wuxuu sheegay inay muhiim tahay in la hubiyo caafimaadka Andres Iniesta, si uu uga caawiyo kooxdiisa iyo waliba qarankiisa Spain ku guuleysiga koobab.
Iniesta iyo Alba ayaa waxay hada ay yihiin liiska ciyaartoyda uu maamulaha Spain usoo xushay inay udheelaan kulamada saaxibtinimo, kuwaasoo ay la kala balansan yihiin dalalka kala ah: Germany oo ay caawa la dheelayaan iyo Argentina.
“Waa ciyaaryahan qaas ah, waana midka kaliya ee noociisa ah, kaasoo ku sugan Barcelona,” ayuu Alba ka sheegay shir jaraa’id.
“Waxaan ku dareemay mudadii aan la ciyaarayay tan iyo 2012 raaxo badan, wuxuuna noo ahaa ciyaaryahan muhiim ah, labaduba qaranka iyo kooxda Barcelona.
“Wuxuu hada ku jiraaa hada sanad ciyaareed fiican, wuxuuna hada ku sameynayaa waxyaab wanaagsan,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
“Marka, waa inaan hubinaa caafimaadkiisa, si uu noogu noqday mid muhiim ah, oo uu naga caawiyo inaan qaadno koobab, labaduba Spain iyo Barcelona,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Jordi Alba oo daafaca uga dheela Bluagrana.